बढ्दैछ कोरोना, चल्दैछ जात्रा ! (तस्बिरमा हेर्नुहोस्) | Ratopati
बढ्दैछ कोरोना, चल्दैछ जात्रा ! (तस्बिरमा हेर्नुहोस्)
२५ जनाको कोटा कागजमै सिमित
personसुवास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ७, २०७८ chat_bubble_outline0
नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सोमबार निर्णय गर्‍यो – मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, ब्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी नहुने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको पूर्णपाठ : जन्तीदेखि मलामीसम्म २५ जनाको कोटा !
​तर, सरकारको उक्त निर्णयको उल्लंघन दोस्रो दिनबाटै सुरु भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट सरकारी नियमको उल्लंघनको शुरुवात गरेकोमा साँझ उक्त नियमलाई सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको क्रममा पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
​पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा पछिल्लो समय कै सर्वाधिक १७ सय ३६ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसमध्ये, कोरोनाभाइरस संक्रमणको हब बनेको काठमाडौँमा मात्र एकै दिन ५ सय ५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
​संक्रमणको उच्च जोखिमको बाबजुद पनि वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा मंगलबारबाट सुरु भएको छ । रथयात्राका लागि दिउँसो चार बजे काठमाडौंको केलटोलबाट देवताको रथ दरबारमार्गस्थित तीनधारा पाठशाला अघि लगिएको थियो । रथयात्रा भने आज बेलुकी ६ बजेबाट शुरु भएको थियाे । रथयात्राको पहिलो दिन सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई भोटाहिटी हुँदै असनमा लगि राखिनेछ ।
असनमा पुर्याइएपछि आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रथको दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । मच्छिन्द्रनाथको रथलाई दरबारमार्गबाट असन, वसन्तपुर, जैसीदेवल, लगन हुँदै पुनः मच्छिन्द्रबहालमा पुर्याएपछि अन्त्य गरिन्छ ।
यस्तो छ ललितपुरको च्यासलमा स्थानीयले बनाएको आइसोलेसन सेन्टर (फोटोफिचर)
फेरि सडकमै खाना...